गर्भावस्थामा किन हुन्छ मधुमेह? कसरी बच्न सकिन्छ? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भावस्थामा किन हुन्छ मधुमेह? कसरी बच्न सकिन्छ?
कमला गुरुङ शनिबार, भदौ १२, २०७८, ०६:०२:००
काठमाडौं– गर्भावस्था एक संवेदनशील अवस्था हो। गर्भावस्थामा महिलालाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्छ। गर्भावस्थामा कतिपय महिलालाई ‘मधुमेह’को समस्या देखिन सक्छ। जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘जेस्टेशनल डायबिटिज’ भनिन्छ। जेस्टेशनल डायबिटिज हुनुको विभिन्न कारणहरु छन्।
३५ वर्ष माथिका, मोटापन, पहिलेदेखि रक्तचाप भएको र गर्भ खेर गएका महिलामा जेस्टेशनल डायबिटिज हुने जोखिम बढी रहने प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा सन्देश पौडेल बताउँछन्।
जेस्टेशनल डायबिटिज भनेको के हो? यो समस्या किन हुन्छ? कसरी बच्ने लगायत विषयमा हामीले डा पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
गर्भावस्थामा किन मधुमेह रोगको समस्या देखिन्छ?
– गर्भावस्थामा देखिने मधुमेह दुई किसिमको हुन्छ। एक, पहिले नै मधुमेह भएको र दोस्रो, गर्भावस्थामा हुने।
– सामान्यतया गर्भावस्थामा शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै उत्पादन हुन्छ।
– गर्भावस्थामा ग्लुकोजको मात्रा धेरै भए पनि सबै महिलामा मधुमेह हुने जोखिम भने हुँदैन।
– ३५ वर्ष माथिका, मोटापन, पहिलेदेखि रक्तचाप भएको र गर्भ खेर गएका महिलामा मधुमेहको समस्या हुन सक्छ।
– यी जोखिम कारकको आधारमा जेस्टेशनल डायबिटिज भए/नभएको थाहा पाउन परीक्षण समेत गर्छौ।
गर्भावस्थामा पहिलो पटक देखिने मधुमेहले बच्चा र आमालाई कस्तो असर गर्न सक्छ?
– पहिले नै मधुमेह भएका महिला र पछि देखिएको महिलामा असर फरक हुन सक्छ।
– पहिले मधुमेह भएका महिलाको रक्तचाप बढ्न सक्छ भने बच्चाको वृद्धि विकास राम्रोसँग हुँदैन।
– शिशु जन्मिएपछि चिनी कम हुने, क्याल्सियम, म्याग्नेशियमको कमी हुनुका साथै जण्डिस हुन सक्छ।
– गर्भमा रहेको शिशु अपांग हुने पनि जोखिम हुन्छ।
– गर्भावस्थामा देखिएको मधुमेहले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने संभावना बढेर जान्छ।
– डेलिभरीपछि बढी रक्तश्राव हुने, संक्रमणको सम्भावना पनि धेरै हुन्छ।
– बच्चा धेरै ठूलो भएपछि सुत्केरी हुने क्रममा असर गर्छ।
– गर्भावस्थामा देखिएको मधुमेह सुत्केरी भएपछि घट्छ भने ५० प्रतिशत महिलामा ५ देखि १० वर्षमा मधुमेह देखिन सक्छ।
शिशु जन्मिएपछि पनि उनीहरुलाई पुनः मधुमेह देखिने संभावना बढेर जाने भयो?
– हो, ती महिलाको उमेर अनुसार पछि पनि मधुमेह देखिने सम्भावना हुन्छ।
– केही महिलालाई मधुमेह निको हुँदैन भने धेरैको पछि देखिने संभावना धेरै हुन्छ।
गर्भावस्थामा पहिलोपटक मधुमेह हुँदा खानपान र जीवनशैलीमा कसरी ध्यान दिने?
– यो बेलामा खानपान मात्र नभई शारीरिक व्यायाम पनि गर्नुपर्छ।
– ४०–५० कार्बोहाइड्रेट, २५–३० प्रोटिन र बाँकी प्रतिशत फ्याट शरीरलाई आवश्यक पर्छ।
– हामीले निश्चित सुझाव दिए पनि पोषणविद्सँगको सल्लाहअनुसार खानपान गर्नुपर्छ।
– दुई हप्तादेखि एक महिनासम्म पनि मधुमेह नियन्त्रण भएन भने मात्र अवस्था हेरेर औषधिको प्रयोग गर्छौं।
गर्भावस्थामा देखिने मधुमेहको पहिचान कसरी गर्ने?
– यो अवस्थामा केही लक्षण नदेखिन पनि सक्छ।
– बच्चा बस्ने भागमा धेरै पानी भए, आमाको तौल एक्कासी बढ्दै गए शंका गर्नुपर्छ।
– धेरै तिखा तथा पिसाब लाग्नु पनि यसको लक्षणहरु हुन्।
– यकिन तथ्याङ्क नभए पनि एसियनहरु जेस्टेशनल डायबिटिजको बढी जोखिममा हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
गर्भावस्थामा देखिने मधुमेहको समस्याबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
– यो समस्या निम्त्याउने सबै जोखिमका कारकलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन।
– गर्भभन्दा अगाडिको शरीरको तौल मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
– समस्याको प्रारम्भिक पहिचान गर्न सके यसले निम्त्याउने जटिलतालाई कम गर्न सकिन्छ।
– रोगको प्रारम्भिक पहिचान गर्न नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ।